Fanomanana ny tetikasa | Reef Resilience
Ny mpitantana ny loharanom-pahalalana dia mizaha ny fomba fampiasana fitsabahana amin'ny laoniny mavitrika mba hanalefahana ny fahasimban'ny haran-dranomasina ary hampiroborobo ny fanarenana sy ny faharetana.
Tsindrio ny sary etsy ambony raha te hiditra amin'ny Torolalana
Ny antony manosika maika hitazonana ny haran-dranomasina dia nampiroborobo ny firosoana hanarenana sy hanarenana ireo haran-dranomasina, miaraka amin'ireo tetikasa, fikarohana fikarohana ary fampiasam-bola mihamaro. Na izany aza, ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina ho toy ny saha dia mbola eo am-piandohany, miaraka amina tetikasa sy teknika marobe mbola kely sy andrana. Rehefa mitady hampiasa vola amin'ny asa famerenana amin'ny laoniny ny mpitantana dia takiana ny fandaminana tsara mba hanatsarana ny vintana hahomby amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny drafitra ilaina dia misy ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahaizana eo an-toerana, ireo mpandray anjara ary mpanapa-kevitra hanapa-kevitra amin'ny fomba, rahoviana ary aiza no hanaovana ny famerenana amin'ny laoniny, ary ny fomba ahafahany mameno - fa tsy manala amin'ny - paikady fitahirizana haran-dranomasina sy fitantanana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTorolàlana ho an'ny mpitantana ny drafitra famolavolana sy famolavolana ny haran-dranomasina manohana ny filàn'ny mpitantana haran-dranomasina mitady hanombohana ny famerenana amin'ny laoniny na fanombanana ny programa famerenana amin'ny laoniny ankehitriny. Ny Torolàlana dia mikendry ireo mpitantana harena an-dranomasina sy mpiaro ny tontolo iainana, miaraka amin'ireo rehetra izay mikasa, manatanteraka ary manara-maso ireo hetsika famerenana amin'ny laoniny.
Dingana enina dingana enina aseho ao amin'ny Torolalana. Ny dingana tsirairay dia voafaritra ao anatin'ny fizarana iray ao amin'ny Torolalana. Ny fihodinan'ny drafitra dia miverimberina, noho izany ny boriborin'ny fizotrany sy ny zana-tsipìka misy lafiny roa eo anelanelan'ny dingana. Ny tsingerina dia misy teboka fidirana marobe izay azo ampiasaina arakaraka ny toerana misy ireo mpampiasa Torolàlana amin'ny dingan'ny drafitra ao amin'ny faritra misy azy ireo.
Amin'ny alàlan'ny dingana enina, fandrindrana fitantanana adaptive, ny Torolàlana dia manampy ny mpitantana hanangona angon-drakitra mifandraika amin'izany, hametraka fanontaniana manakiana, ary hanana resaka lehibe momba ny famerenana amin'ny laoniny ny toerana misy azy ireo. Ny dingana voalaza ao amin'ny Torolàlana dia mitarika amin'ny famoronana drafi-panatanterahana famerenana amin'ny laoniny. Ny mari-pamantarana ny fizotrany dia misy ny toetra miverimberina amin'ny tsingerin'ny drafitra sy ny fomba fiheverana ny fiovan'ny toetrandro, izay hianarantsika sy hanatsarana ny ezaka famerenana amin'ny laoniny izay mety hahatratra ny tanjona lavitra amin'ny tontolo mafana. Ny dingana efatra voalohany amin'ny tsingerin'ny drafitry ny Torolàlana dia mifantoka amin'ny drafitra mifototra amin'ny tanjona sy ny famolavolana ny fitsabahana amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Ny dingana roa farany dia miresaka momba ny fiheverana amin'ny fampiharana amin'ny ambaratonga feno sy fanaraha-maso maharitra.
Ny Torolàlana dia misy Appendice roa sy fitaovana hafa ary fitaovana azo ampiasaina hanampiana ireo mpamaky amin'ny famolavolana drafitra famerenana amin'ny laoniny, anisan'izany ny:
soratana sy asiana marikamanokatra fisie WORD (.doc) - manampy amin'ny fandraketana ny fizotrany, ny fampahalalana ary ny fanapahan-kevitra noraisina nandritra ny dingana 1-4 amin'ny dingan'ny drafitra.
Modely momba ny drafitra asamanokatra fisie WORD (.doc) - azo ampiasaina hanefitra ny drafitra famerenana amin'ny laoniny amin'ny alàlan'ny fampahalalana voafintina rehefa feno ny Workbook.
Dingana 2 Tutorial sy ohatra fenomanokatra fisie EXCEL (.xlsx) - manolotra ohatra miasa momba ny fomba fanangonana, fanasokajiana ary famakafakana data mba hanampiana amin'ny fisafidianana ireo tranonkala ho an'ny famerenana amin'ny laoniny.
Dingana 3 Fitaovana fanombanana ny fepetra fitsabahanamanokatra fisie EXCEL (.xlsx) - manampy amin'ny fanombanana ary avy eo misafidy safidy fanelanelanana amin'ny famerenana amin'ny laoniny.
Citation: Shaver EC, Courtney CA, West JM, Maynard J, Hein M, Wagner C, Philibotte J, MacGowan P, McLeod I, Boström-Einarsson L, Bucchianeri K, Johnston L, Koss J. 2020. Torolàlana ho an'ny mpitantana ny famerenana amin'ny laoniny ny haran-dranomasina Fandrafetana sy famolavolana. Programme fiarovana ny haran-dranomasina NOAA. Memorandum ara-teknika NOAA CRCP 36, 120 pp. misokatra amin'ny varavarankely vaovaohttps://doi.org/10.25923/vht9-tv39.
Ireto fizarana manaraka ireto dia mamaritra ny fomba hanapahan-kevitra amin'ny fanombohana ny famerenana amin'ny laoniny sy ny famatsiam-bola maharitra ho an'ny tetikasa famerenana amin'ny laoniny.